Kaniisadda Anglican ee England waxay u aragtaa Awoodda Cagaaran Waxayna Rabtaa Inay Maal gasho Xashiishka Caafimaadka. • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Kaniisadda Anglican ee England waxay u aragtaa inay cagaaran yihiin, waxayna doonayaan inay maalgashadaan xashiishada cannabis.
Kaniisadda Anglican ee England waxay u aragtaa inay cagaaran yihiin, waxayna doonayaan inay maalgashadaan xashiishada cannabis.
albaabka daroogada June 24 2019
maqaal by daroogada June 24 2019
Kaniisada England, waa urur diimeedka ugu weyn uguna saameynta badan Ingiriiska, wuxuu toddobaadkan shaaciyay inuu qaadayo xayiraad muddo dheer saarneyd xashiishadda caafimaadka si loo baaro maalgashiga warshadaha sida xawliga ah u koraya uguna macquulsan ee faa'iidada badan leh.
Komishannada Kaniisadda ee ururka ayaa mas'uul ka ah maaraynta hantida Church 8,3 bilyan oo gini - mid duleedyada maalgashiga leh hanti ma guurto, lacag caddaan ah iyo danno shirkado kala duwan leh oo buuxiya shuruudaha 'anshax iyo masuuliyad'. In kasta oo xayiraadan iskeed isu soo rogtay, Guddiyadu waxay ku guuleysteen inay kobciyaan sanduuqa 30% sanad kasta 5kii sano ee la soo dhaafay marka loo eego sanadkii ka horreeyay.
Sida ururada kale ee leh lacagaha wadajirka ah ee qiimaha ku saleysan, kaniisaddu waxay muddo dheer ka soo horjeeday saamiyada waxa loogu yeero "saamiyada dembiga," oo ay ku jiraan shirkadaha khamriga iyo tubaakada. Maalgashiyada shirkadaha soo saara oo suuq geeya dawooyinka dawooyinka ayaa ilaa hadda la oggol yahay.
Waddanka Ingiriiska tan hadda waxaa ku jira xashiish daawo ah. Xafiiska Arimaha Gudaha ee Boqortooyada Midowday (UK) wuxuu u ogolaaday dhakhaatiirta inay bilaabaan qorista dawooyinka xashiishka daweynta ee dayrta qarnigii la soo dhaafay, in kasta oo marin u helida bukaanku ay weli tahay mid aragti ahaan aad u badan - daawada ayaanan daboolin Adeegga Caafimaadka Qaranka , taas oo macnaheedu yahay in suuqa sharci darrada ah uu weli yahay meesha ugu macquulsan ee laga galo qof walba - marka laga reebo kuwa hodanka ah.
Sida tan Financial Times ayaa marka hore la soo sheegayGudiga kaniisadaha waxay tixgelin siinayaan maalgashiga "markii ugu horeysay" shirkadaha la tacaalaya kaliya xashiishadda caafimaadka.
Edward Mason oo ah sarkaalka mas'uulka ka ah maalgashiga kaniisada ayaa u sheegay wargayska Financial Times "Waxaan kala saareynaa xashiishadda madadaalada iyo xashiishka caafimaadka". "Waan ku qanacsanahay in loo isticmaalay ujeeddooyinka saxda ah ee daaweynta."
Ka warran bukaanada? Kaniisaddu waxay maalin un ku dhawaaqi doontaa "mowqif rasmi ah" oo ku saabsan xashiishad caafimaad "dhowaan," ayuu yiri Mason.
Dhanka kale, kaniisadda ayaa isbedel ku sameyn karta siyaasadda, kaniisaddu waxay maalgelin kartaa shirkadaha sida GW Pharmaceuticals ee UK, oo ah kan ugu jecel adduunka maalgashiga cannabis iyo iibiyaha daroogo loo yaqaan 'cannabis-derived' oo loo ogolaaday isticmaalka labadaba Maraykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Siyaasadda cusubi waxay ka hortagtaa kaniisadda in ay ka fekereyso xiisaha shirkadaha kuwaas oo sidoo kale diiradda saaraya marijuuca madadaalada, sida Canopy Growth Corp., oo ku taala Canadian Cannabis waxay raadineysaa qayb weyn oo ka mid ah sii kordhaya Suuqa Yurub Sida laga soo xigtay Financial Times, kaniisaddu ma maalgeliso shirkad lacag ka badan 10% dakhligeeda ka soo saarto waxyaabaha cannabis ah ee loogu talagalay isticmaalka madadaalada.
Maaddaama suuqa xashiishka sharciga ah uu sii weynaanayo isla markaana uu sii ballaaranayo adduunka, waxay noqoneysaa bartilmaameed soo jiidasho leh oo loogu talagalay maalgashadayaasha guud, oo ay ku jiraan kuwa badan oo ka soo horjeeday sharciyeynta shaqooyinkii hore. Tusaale ahaan, Guddoomiyihii hore ee Aqalka Mareykanka John Boehner, oo hadda noqda milyaneer badan markii Acreage Holdings, shirkad xashiish ah oo Boehner ay ugu adeegto Golaha Maamulka, ay la wareegtay Canopy.
Qiyaasaha qaarkood, suuqa xashiishadda adduunka ayaa durba qiimaheeda ka badan yahay $ 10 bilyan - oo ah shay laga yaabo inay hooseyso, iyadoo la siinayo in ka badan $ 1,5 bilyan oo marijuana ah oo ay dadka waaweyn u adeegsadaan madadaalo ahaan dadka, lagu iibiyey Colorado oo keliya sanadkii hore.
Kaniisaddu wali waxay u baahan tahay inay si cad u qeexaan yoolalka gaarka ah ee maalgashiga waxayna ka dhigaan iyaga inay ogaadaan dunida dibaddeeda.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso Leafly (EN, ilaha)
saamiyadamaalgelintacannabisdaroogadaEuropamaaliyad ahaansharci-dejintadaawada cawskaBoqortooyada IngiriiskaMaraykanka
Taxanaha daawooyinka Netflix ee ugufiican iyo documentaries
Saliida CBG si loola dagaallamo xanuunka maqaarka
Cocaine kingpins waxaa soo ururiyay Europol
MDMA waxaa la caddeeyey in ay ka caawiso dhaawacyada. Markaa waqtiga...
Sharciga Mexico uu soo jeediyay ee lagu mamnuucayo marijuana...